विद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने ! – Nepal Online Khabar
April 9, 2021 1641
काठमाडाैं : स्वास्थ्य मन्त्रालयले काेराे’ना भा’इरसको नयाँ लहर फैलिएको भन्दै शिक्षण संस्थाहरुको प्रत्यक्ष पठनपाठन ब’न्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेत्र त्रिपाठीले को’भिड–१९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकमा सिफारिसमाथि छलफल हुने बताए ।
मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘नयाँ खाले युके भेरि’यन्टको असर युवाहरुमा देखियो । हामीले पठनपाठन भर्चुअल माध्यमबाट गरौं भनेर विद्यालयहरु ब’न्द गर्न सिफारिस गरेका छौं । वालवालिकाहरुलाई कुनै जो’खिम नहोस भन्नेमा सरकार ग’म्भीर छ ।’मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य मा’पदण्डमा सबै सचेत नहुने हो भने अवस्था फेरि भ’यावह हुने बताएका छन् ।
विद्यालयमात्र होइन सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गर्न सिफारिस गरिएको छ ।को’भिडको जो’खिम बढेसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालका स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इन्जि’नियरिङले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन कार्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने अवधिमा स्कुल तथा विभागीय प्रशासनहरू सुचारु हुने र अनुसन्धान तथा प्रो’जेक्टका कार्यहरू सम्बन्धित प्रमुखहरूको नि’र्णयबमोजिम गर्न आग्रह गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोभिडको जो’खिम नभएको ठाउँमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर र असहज अवस्था भएका ठाउँका क्याम्पसमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले भने, ‘को’भिडको जो’खिम बढेपछि कलेजहरूले सोधेका छन्, हामीले आफैँले निर्णय गर्न भनेका छौँ । सम्भव हुने ठाउँमा फेस टु फेस र असहज भएका ठाउँमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न भनेका छौँ ।’को’भिडको सं’क्रमण देखिएका त्रिविका केही कलेजमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएका छन् ।
पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा कसरी को’भिड– १९ सं’क्रमण फैलियो भन्ने यकिन नभएको सहायक क्याम्पस प्रमुख गोपालप्रसाद घिमिरेले बताएका थिए । हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेजका चारजना शिक्षक, दुई कर्मचारी र दुई विद्यार्थीमा को’भिड– १९ को संक्र’मण देखिएपछि केही दिनअघि एक हप्ताका लागि शैक्षिक संस्था ब’न्द गरेको थियो ।
Prevभारतसँग सीमा जोडिएको छा’ङ्गरू गाउँ ६ महिना सुनसान, एक्लै चौ’कीदारी गर्छन् राइसिंह !
Nextविदेश बाट घर फर्कदै हुनुहुन्छ? कतिसम्म सुन लान पाईन्छ ?